मनोरञ्जन Archives - Hello Punarwas
-सुनिलकुमार लो काठमाडौ, २ फाल्गुन । नेपालको मध्य तथा सुदुरपश्चिमका १३२ भन्दा कलाकारहरुको सामुहिक स्वरमा रहेको ऎतिहासिक देउडा गीत "न्याउल्या"को हालै काठमाडौमा एक भव्य कार्यक्रम बिच बिमोचन गरियो । देउडा गितको दुनियाँमा नौलो प्रयास भएको संगित पारखीहरुको भनाई रहेको छ । कार्यक्रममा…Read more
मेषः मेष राशि भएका व्यक्तिहरू धेरैजसो सिंह राशिप्रति आकषिर्त देखिन्छ। यो आकर्षण तत्कालका लागि बढी स्वप्निल हुन्छ। लामो समयका लागि भने मेष राशिको जोडी मकर र कुम्भ राशिसँग सकारात्मक हुन्छ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले अन्य राशिलाई पनि मन पराउन सक्छन्,…Read more
युवराज न्यौपाने कैलाली, २६ साउन । चर्चित गायक सुनिल नगार्जिको तीज गीत छमछमी वजारमा आएको छ । गत वर्षको लेहङ्गा र चोलीबाट निकै चर्चा वटुलेका गायक सुनिलको संगीत तथा स्वरमा यस वर्षको गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतका गायक नगार्जिलाई…Read more
बिग बोस फेम स्वामी ओमजी महाराज चोरी आरोपमा दिल्लीमा पक्राउ परेका छन् । उनीमाथि चोरी गरेको तथा घरभित्र जबरजस्ती पसेर हतियार लुकाएको आरोप छ । थाहा भएकै हो, स्वामीले बिग बोसमा उत्पात मच्याएका थिए । शोका क्रममा उनले आफु…Read more
हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, २६ साउन । सांगितिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाई पछिल्लो समयमा दर्शक र स्रोता माँझ निकै लोकप्रियता कमाउन सफल सर्जकका रुपमा चिनिने व्यक्ति मध्ये तेजेन्द्र विवश रावल पनि एक हुन् । प्रदेश नं. ७ सूदुरपश्चिमको डडेल्धुरा…Read more
बलिउडको ‘ब्याड लक’
शनिबार बेलुकी भारतको कोलकत्तामा आयोजना भएको चलचित्र ‘जब ह्यारी मेट सेजल’को प्रमोशन कार्यक्रममा मुख्य नायक साहरुख खान र नायिका अनुष्का शर्मालाई हेर्न करिब ७० हजार भन्दा बढी दर्शक उपस्थित भए । कोलकत्तामा साहरुख र अनुष्काको गजबको क्रेज देखियो । यो…Read more
भारतीय हास्यकलाकार कपिल शर्मालाई डिप्रेशनसँग जुधिरहेको भन्ने खबरले बिगत लामो समयदेखि चर्चा पाइरहेको छ तर अब कपिल आफैंले यसबारे मुख खोलेका छन् । कपिल शर्माले एक वेबसाइटलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनको स्वास्ूथ्य खराब हुनुको पछाडि अन्य कारण भएको बताए । कपिलका…Read more
ट्यूबलाइटबाट धोका पाएका सलमान खानका फ्यानहरु उनको आगामी फिल्म ‘टाइगर जिन्दा है’ को प्रतिक्षामा छन् । यो फिल्मको हालै पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । फिल्मको पोष्टमा नयाँ प्रयोग गरिएको छ । पोष्टरमा सलमानको अनुहार होइन, पिठ्यू मात्र देखिन्छ । उनी…Read more
‘बेहद’की ‘माया’को पारिश्रमिक, एक भागको १ लाख
जेनिफर विंगेट अहिले टेलिभिजन दुनियाँकी सर्वाधिक चर्चित कलाकार हुन् । सोनी टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने चर्चित सिरियल ‘बेहद’मा उनले गरेको नकारात्मक भूमिकाको फ्यान अहिले हरेक घर-घरमा छन् । ‘माया’ नाममा उनले निर्वाहा गरेको भूमिकाले हजारौलाई फ्यान बनाएको छ । जेनिफर यो…Read more
मुम्बई । हिन्दी चलचित्र ‘बाहुबलि-२’ हेर्न दर्शकले एउटा टिकटको २४ सय भारतीय रुपैंया तिर्नुपर्ने भएको छ । चलचित्र निर्माण संस्था र सिनेमा हल मिलेर टिकटको नयाँ दररेट सार्वजनिक गरेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेको छ । यो रेट सबै हलमा भने…Read more
​सोनाक्षीले गरिन् इंगेजमेन्टको मिडियामा भाइरल सत्य यस्तो रहेछ
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले इंगेजमेन्ट गरेको खबरले अहिले बलिउड तातेको छ । सोनाक्षीले आफ्ना प्रेमी बन्टी सजदेहसँग इंगेजमेन्ट गरेको र केही समयपछि नै उनीहरूले बिहे गर्ने समाचार आएको छ । तर, आफ्नो बिहेबारे आइरहेका समाचार सत्य नभएको सोनाक्षीले दाबी गरेकी छिन् ।…Read more
कटप्पाले किन माग्नुपर्‍यो माफी ?
एसएस राजमौली निर्देशित बहुप्रतिक्षित फिल्म बाहुबलीको सर्वाधिक कौतुहलताले भरिएको पात्र हुन्, कटप्पा । फिल्मको पहिलो भागमा कटप्पाको कृत्यसँगै फिल्मले एउटा प्रश्न छाडेर जान्छ, आखिर किन कटप्पले बाहुबलीको हत्या गर्‍यो ? यसको जबाफ बाहुबली द कन्क्ल्युजनमा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जो…Read more
सलमानको घाटीमा जुत्ताको माला, कथा के हो ?
चलचित्रको प्रचार शैली निक्कै महंगो हुन थालेको छ, बलिउड नायकका लागि । चलचित्र प्रदर्शनको बेला आमिर खानले नयाँ-नयाँ फण्डा देखाउन थालेपछि अन्य कलाकार समेत प्रचारको नयाँ शैली खोज्नमा ब्यस्त छन् । पछिल्लो समय नायक सलमान खानले पनि नयाँ चलचित्रको पोष्टर…Read more
अंग्रेजी सिरियल ‘क्वान्टिको-२’ मा ब्यस्त बलिउड नायिका प्रियंका चोपडाले यही वर्ष बलिउड चलचित्रमा काम गर्ने भएकी छिन् । अनिरुधा राय चौधरीसँग काम गर्ने सम्झौता गरेकी प्रियंका अब एउटा सस्पेन्स चलचित्रमा नायिकाको रुपमा देखिने भएकी छिन् । आउँदो जुनदेखि सुटिङ सुरु…Read more
भारतमा जब मिलनको अमिताभसँग भेट भयो‘
हेल्लो समाचारदाता मुम्बईं, ५ बैशाख÷ सांगीतिक कार्यक्रमका लागि भारतको पुना पुगेकी गायिका मिलन अमात्य बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनसँगै एउटै मञ्चमा देखिएकी छिन् । ‘अभिनेता बच्चनसँग मेरो पहिलो भेट भएको हो, असाध्यै खुसी लाग्यो ।’ मिलनले भनिन् । उनले पहिलो पटक…Read more